बँदेलले अन्नवाली नष्ट गरिदिएपछि अधिकारीचौरका किसानले बारीमा खेती गर्न छोडे ! – ebaglung.com
२०७४ बैशाख ५, मंगलवार २१:४६	Footer Slider, Top News, थप समाचार, विविध
हुमकुमारी अदै, बुर्तिवाङ २०७४ बैशाख ५ । ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ६ अधिकारीचौर कुदुम माटे गाउँमा बदेलले अन्नवाली नष्ट गरिदिएपछि त्यहाँका किसानले बारीमा खेतिवाली लगाउन छाडेको बताएका छन् ।
करिव ६ वर्ष अघि बारिमा लगाएको मकै र आलुको आम्दानीले परिवारलाई खान पुग्थ्यो, माटेगाउँ नजिकैको घना जंगलमा, जंगली जनावर बँदेलको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको र बारीमा लगाएको खाद्यन्नवाली खान थालेपनि त्यहाँका किसानले उक्त जग्गा बाँझो राख्न वाध्य भएको स्थानीय हरि कुमारी अदैले बताईन ।
‘ ५/६ वर्ष पहिले ८/९ मुरी मकै उत्पादन गरिन्थ्यो, अहिले बदेलले बारिमा लगाएको बाली नष्ट गरिदिन थालेपनि थोरै जग्गामा मकै र आलु खेती गर्ने गरेको अदैले बताईन ।
जंगलमा बँदेल र सारा लगायतका जंगली जनावरहरुले आलु तथा मकै बाली लगाएकै समयमा खाइदिन थालेपनि त्यस स्थानको करिव २५ घर धुरीले बारीमा अन्नवाली लगाउन छाडेका बताएका छन् ।
कुनैवेला बारीमा लगाएको मकै र आलु बजारसम्म वेचेर चामल किनेर खाने गरेको बताउने अर्की स्थानीय बेलमती अदै, अहिले आफ्नो बाली लगाउने, बारी वाँझो हुँदा चामल किनेर खान अरु नै विकल्प खोज्नु पर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरिन् । बेलमतीको बारीमा पनि ५ वर्ष अघि १० मुरी मकै फल्थ्यो, ४ मुरी आलु पनि उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले जंगली जनावरले बाली नष्ट गर्न थालेपछि सबै गाउँलेले खेति गर्न छाडेको उहाँको भनाई छ । गाउँका अरुसँगै आफूले पनि वारीमा पनि ३ वर्ष यता आलु खेति लगाउन छाडेको बताईन् ।
यस्तै अर्की किसान होकसरी अदैले पनि कुनै समय आफ्नो बारीमा १ देखि १२ मुरी मकै र ४/५ मुरी आलु उत्पादन हुने बताईन । हरेक साल वारीमा जंगली जनावरले वाली नष्ट गरिदिन्छ, बाली लगाए नलगाएको एकै हुने भएपछि बारी यत्तिकै घाँस उमारेर राख्नु पर्ने बाध्यता भएको र आफूहरु मर्कामा परेको बताईन ।
जंगली जनावरको रोकथाम कस्ले गरिदेला भन्दै सबै स्थानीय चिन्तित छन् । आफ्नो वारीमा उत्पादन भएको आलु बेचेर अरु घरायसी सरसामान र चामल खान पुग्थ्यो, आजकल बारीमा आलु लगाउन छाडेपछि समस्या भएको अदैको दु:खेसो छ ।
गाउँका जान्ने मान्नेसँग त्यहाँको समस्याका विषयमा कुराकानी त हुन्छ तर उपाय कतैबाट आएको छैन । अधिकारीचौर कुदुमका किसानले जंगली जनावरले सास्ती दिएको गुनासो सुनाउछन् ।